မင်း အော င် လှို င်အ မြင် မှန်ရပြီး ကိုယ့်နေရာ ကို ယ် သိဖို့ ဦး ရဲ ထွ ဋ် မှ ဥ ပ မာပေး၍ အကြံ ပြုလိုက်သည့် …. – OK Media
မင်း အော င် လှို င်အ မြင် မှန်ရပြီး ကိုယ့်နေရာ ကို ယ် သိဖို့ ဦး ရဲ ထွ ဋ် မှ ဥ ပ မာပေး၍ အကြံ ပြုလိုက်သည့် ….
February 20, 2022 Ok MediaLeaveaComment on မင်း အော င် လှို င်အ မြင် မှန်ရပြီး ကိုယ့်နေရာ ကို ယ် သိဖို့ ဦး ရဲ ထွ ဋ် မှ ဥ ပ မာပေး၍ အကြံ ပြုလိုက်သည့် ….
အသက် ကိန်း ဂ ဏ န်းတွေ ကြီးလာတာနဲ့ အမ ျှ လိုက် ပြော င်းလဲနေတာက ခါး ရဲ့ ကိန်း ဂဏ န်း တွေပဲ။ အသက် ၆၀ ကျော်ပြီ ဆို ရင်တော့ လေ့ကျင့် ခန်း ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်၊ အစားနဲ့ ဘယ်လိုထိန်းထိ န်း မလွ ယ်တော့ဘူး။ အဲဒီလို ဖြစ် လာတဲ့အခါ ပုဆိုး ဝ တ်ရတာ ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ဘောင်းဘီဝ တ်တဲ့အခါ ပြ ဿ နာ တက်တော့တာပဲ။
ကျွန်တော် တို့ လူငယ်ဘ၀ ၁၉ ၇၀၊ ၁၉ ၈၀ နှစ်များဆီကတော့ ဂျင်း ဘော င်း ဘီ ဝယ်ချင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ကို ပြေးရ တာပဲ။ အဲဒီအချိန်က ဂျ င်း ဘောင်း ဘီ အပါအဝင် နိုင်ငံခြားဖြစ် အဝတ် အထည်တွေ လိုချင်ရင် ဗိုလ်ချုပ် ဈေးက ဆရာ ကြီးပေါ့။
ဂျပန်ပ စ္စည်း၊ အမေရိ ကန်ပစ္စည်း ဆိုတာက ဗိုလ်ချုပ် ဈေး မှာပဲ ရနိုင်တာလေ။ ဒါပေမယ့် အခုလို ပြည်ပက တရားဝင် တင်သွင်းပြီး ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ခင်းကျင်း ပြ သပြီးရောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့ သူတွေ အထူးသဖြင့် သဘောင်္သား တွေ ယူ လာတဲ့ အထ ည်တွေရောင်းတာပါ။ ဒါတောင် တစ်မျိုးကို သုံးလေးထည်ထက် ပိုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို ဆိုင်တွေထဲမှာတော့ ဂို ရား ဆိုင်ဆိုတာက နာမည်ကြီးပဲ။
အဲဒီကာလ က ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝယ်တဲ့အခါ အခုခေတ်လို တစ်ထည်ပြီး တစ် ထည် စိတ်ကြိုက် ဝတ်ကြည့် ပြီးမှ ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ ရှိတဲ့အထဲက ယူရတာ။ ကိုယ်နဲ့ အတိ အကျဖြစ်တဲ့ ခါးအရွယ် အစား၊ ခြေထောက် အရှည်ဆိုတာ ကံကောင်းမှ ကွက်တိ ရ တာ။ များသောအား ဖြင့် အနီးစပ် ဆုံးရတာ ကို ဝယ်ပြီး အပ်ချုပ်ဆိုင်မှာ သွားပြင်ရတာပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ့ မောင် ထော် လေး လမ်း ( အခု ဗို လ် ဆွန်ပတ်လမ်း) ထဲမှာ အဲဒီလို ပြင်ပေးတဲ့ အပ်ချုပ်ဆိုင် လေးတွေရှိတယ်။ များသော အား ဖြ င့် အပေါ် ဘလောက် အ နော်ရ ထာ လမ်း နဲ့ နီးတဲ့ဘက်မှာ နံရံ ကပ်ဆိုင်လေးတွေ၊ လှေကား ခွ င်အောက်က
ဆိုင်လေးတွေမှာ ပြင်ကြ တာပဲ။ ဒီအပေါ်ဘလောက်မှာပဲ အပ်ချု ပ်ဆိုင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် ဂလုပ်၊ ဂူလန်၊ မီ ယန်း ရှိတယ်။ နောက် ( ) ဟူစိ န် ဆိုတာ လည်း ရှိသေးတယ်ထင်တာပဲ။ နာမည် အပြည့် အစုံ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အခုတော့ ဂ လုပ် နဲ့ မီ ယန်းပဲ တွေ့ တော့တယ်။ ဘောင်းဘီပြင်တဲ့ ဆိုင်လေးတွေတော့ မရှိ သလောက်ပဲ။
ကျွန်တော့်မှာ လွန် ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က ဝယ်ခဲ့ တဲ့ ဂျ င်း တ စ် ထည်ရှိတယ်။ ခါးက တုတ်လာ တော့ အသက်အောင့် ၊ ဗို က် ရှ ပ်ပြီး ဝတ် ရင် တော့ ရပေမယ့် အထိုင် ၊ အ ထ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှတ်တရ ဝယ်ထားတာဆိုတော့ မ ပ စ် ရက်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဘောင်းဘီ လေးကို ပြင်ဖို့ စဉ်းစားရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သိမ်ဖြူလမ်းအတိုင်းသွားတဲ့အခါ အမြဲ တမ်းမြင်နေရတဲ့ လမ်းငါးပွင့်ဆိုင် မီးပွိုင့်နားက “ အလီ အပ်ချုပ်ဆိုင်” ကို ရောက်သွားတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဘောင်း ဘီ ပြင် သည် လို့ ရေး မထားပေမယ့် အတွေ့အ ကြုံအရ ဒီလိုဆိုင်လေးတွေမှာ ပြ င် လို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီး
ရောက်သွားတာ။ ကျွန်တော်ရောက် သွားတော့ ဆိုင်ရှေ့ အပ်ချုပ် စ က်မှာ လူငယ်တစ်ယောက် ရှိတယ်။ ဆိုင်ထဲက အပ်ချုပ်စ က်မှာ အသ က် ကြီးကြီး ၀၀ ဖို င့် ဖို င့် လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အလယ်တည့်တည့် ဆိုင်နံရံမှာ အသစ်ချုပ်ထား တဲ့ ကုတ် အ င်္ကျီ၊ ဘောင်း ဘီ တွေချိတ်ထားတယ်။
ဘေးက စ င် တွေပေါ်မှာ အထည်လိ ပ်တွေရှိတယ်။ ပြင် ဖို့အပ်ထားတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ သား ရေဂျာကင်တ စ်ချို့ရှိတယ်။ ရောင်စုံ အပ်ချည်လုံး တွေရှိတယ်။ ဆိုင်မျက်နှာစာ ဘယ်/ညာ မှာလည်း ဘောင်းဘီတွေ ချိတ်ထားတယ်။
ဂျင်း ဘောင်း ဘီ ပြင် လို့ ရလားလို့ မေးတော့ ရတယ်တဲ့။ ဘောင်းဘီ ကို ယူကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ခါး ကို တို င်းတယ်။ အ တွင်း က နေ တစ် လ က် မ ကျော်လောက်ချဲ့လို့ရမယ်၊ နောက် တစ်ခါ ထပ် ချဲ့ ဖို့ လိုရင်တော့ ပြင် လို့မရတော့ဘူး။ ပေး ပ စ် လိုက်တော့တဲ့။ ဒီတော့လည်း ပြင်ပေါ့ဗျာ လို့ သဘောတူလိုက်တာပေါ့ ။
သူတို့ နဲ့ စကားပြောတော့မှ သူတို့လည်း အရင်က မောင်ထော်လေးလမ်းထဲမှာ အခုလိုပဲ အပ်ချုပ်ဆိုင် ဖွင့်ခဲ့တာတဲ့။ အသက်ကြီးကြီးနဲ့ လူက သူ့ အဖိုးလက်ထက်က စပြီး အပ်ချုပ် လုပ်ငန်းကို လုပ်ခဲ့တာလို့ ပြောပြီး အဖိုး နဲ့ အဖွားရဲ့ အဖြူ အ မည်း ဓာ တ် ပုံကို ပြတယ်။
ဆိုင်ရှေ့မှာ ကျွန်တော့် ဘော င်း ဘီ ကို ပြ င်ပေး တာက သူရဲ့ သား ဆို တော့ ဒီ ဆို င်လေးရဲ့ သက်တမ်းက မျိုးဆက် လေးဆက် ရှိခဲ့ပြီပေါ့။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အဖေက အသ က် ခြောက်ဆယ်ကျော်၊ သားက အသက် သုံး ဆ ယ်ကျော်။ သားလုပ်တဲ့သူက အိမ် ထောင် ကျ ပေမယ့် သားသမီးမရှိ သေးဘူး။ သားမွေးခဲ့ရင်တော့ အပ်ချုပ် ပညာသင်ပေးပြီး ဆက်လုပ်ခိုင်းမှာ လို့ပြောတယ်။
ဒီနေရာကို ရွှေ့ လာတာ ၁၃ နှစ်လောက်ရှိပြီ။ မြို့ထဲမှာ ကားရပ်ဖို့ နေရာခက်တော့ လူအလာ နည်း သွားတယ်။ ဒ့ါကြောင့် ဒီနေရာကို ရွှေ့လာတာလို့ ဆိုတယ်။ အရင်က ဒီနေရာက နှစ်ထပ်တိုက်။ အခုတော့ ကန် ထ ရိုက်တိုက်အမြင့်ဖြစ်သွားပြီ။ ဆိုင်ခန်းငှားခက အရင် သောင်းဂဏန်း၊ အခုတော့ သိန်းဂဏန်း။ မြို့ထဲက နံရံကပ်အခန်းလေးတွေဆိုရင် အခန်းငှားခ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ တွေးကြည့်မိတယ်။
ကိုဗစ် ပထမ လှိုင်း ထဲက ဆိုင် ပိ တ်လိုက်တာ အခု ပြန်ဖွင့်တာ လေးလလောက်ပဲရှိသေးသတဲ့။ လုပ်ငန်းကတော့ အ ရင်လို ပုံ မှ န်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ အပ်ချုပ်ဆိုင်ဆိုတာကလည်း လူတွေ စီးပွားရေးကောင်းမှ ၊ ပွဲလမ်းသဘ င် တွေများမှ အလုပ် ဖြစ်တာကိုး။ အခုအချိန်က လူတိုင်းလိုလို ဗျသန တရားငါးပါး နဲ့ ကြုံနေရတာဆိုတော့ သောက နဲ့ ဒေါသက လွဲရင် ကျန်တာ အားလုံး ရှားပါးနေတော့တာပဲ ။
လောကမှာ ကျွမ်း ကျ င်ရာ၊ လိမ္မာပဲ။ ဘောင်းဘီ ကို ချုပ် ရိုး တွေ ဆွဲ ဖြု တ်၊ အတွ င်းက အသားထပ်ပိုး၊ ပြန် ချုပ် လုပ် လိုက် တာ နာရီဝက် ကျော်လောက်ကြာတော့ ဘောင်းဘီ ပြ င်ပြီးသွားတယ်။ လမ်းဘေး ဆိုင် ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဝတ်ကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေတော့၊ အိမ်ရောက်မှ ဝတ်ကြည့်မယ်ဗျာ၊ အဆင်မပြေရင် ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
အိမ်ရောက်လို့ဘောင်းဘီဝတ်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ လ က် ရာသပ်ယပ်တယ်။ ပြင်ဖို့ အခွင့် အရေးရှိရင် ပြင်လို က် တာ အကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်မှာရှိနေသေးတဲ့ ဘောင်းဘီ တွေထဲက မ တော် တော့တဲ့ ဘော င်း ဘီတွေလည်း ပြင်ရမယ်။ ကိုယ့်နဲ့ မတော်တဲ့ ၊ ကိုယ် နဲ့ မ တ န် တဲ့ ဘောင်း ဘီ ကို အ တင်းဝတ်နေရင် ကိုယ့် အတွက် နေရ ထိုင်ရ အဆင် မပြေသလို ပတ်ဝ န်းကျင်ကလူတွေ မြင်လို့လည်း မကောင်း ဘူး။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်အခြေအနေ ကိုယ်မသိတဲ့ သူ၊ လောဘတက်ပြီး မဆန့်အင်တန် ဝတ်နေတယ် ဆိုပြီးတောင် အထင်သေးခံရ နို င်တယ်။ ဒီတော့ အခြေအနေ မှန်ကို သိ၊ ငါနဲ့ မတော် တော့ဘူး၊ မတန် တော့ဘူး ဆိုတာ ကို လက်ခံပြီး ပြင်လို့ ရရင် ပြင်၊ ပြင် လို့ မရတော့ဘူးဆိုရင် တော်တဲ့ ၊ တန်တဲ့ သူကို ပေးလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။
ညာဘက်လက် နဲ့ USD$ဒေါ်လာဆယ်သန်းရင်းပြီး စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ မြန်မာပြည် အနာဂတ် ဟောကိန်း ( ကျနော်ရှုံးရင် ညာလက်ဖြတ်မယ်။ ကျနော်နိုင်ရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဆယ်သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ ငွေ ကျနော် လိုချင်တယ်။ )